LATAM mara ọkwa ọkwa njem Caribbean ọhụrụ, na-eme ka njikọta si Lima
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » LATAM mara ọkwa ọkwa njem Caribbean ọhụrụ, na-eme ka njikọta si Lima
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
LATAM Airlines Group kwupụtara ọkwa ụgbọ elu abụọ site na Lima hub gụnyere njem Caribbean ọhụrụ, Montego Bay (Jamaica), na ọrụ kpọmkwem na Calama, Chile.
Bido na 1 Julaị 2019, LATAM ụgbọ elu Peru ga-arụ ọrụ ụgbọ elu atọ kwa izu na Montego Bay, na-enye njikọ dị mma na obodo ndị dị na Peru, Chile, Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay na Bolivia. Zọ a ga-arụ ọrụ site na ụgbọ elu Airbus A320 nwere ikike maka ndị njem 174, nke kwekọrọ na ngụkọta nke oche 52,600 kwa afọ.
N'echi ya (2 July 2019), LATAM ga-ebido ụgbọ elu atọ na-enweghị nkwụsị kwa izu site na Lima ruo Calama (Chile), ọnụ ụzọ ámá San Pedro de Atacama, na-ebelata oge njem n'etiti obodo abụọ ahụ site na elekere anọ, nkeji 30.
Enrique Cueto, onye isi oche nke LATAM Airlines Group kwuru, sị, "Na-esote Julaị, anyị ga-enye ndị njem anyị nhọrọ kachasị ukwuu na njem ọhụrụ na Caribbean yana obere oge njem dị mkpirikpi n'etiti Lima na Calama, ọnụ ụzọ ámá San Pedro de Atacama." "Dịka akụkụ nke ntinye aka anyị n'inye njikọ na-enweghị atụ na Latin America, anyị na-aga n'ihu na-eme ka ọ dị mfe ịchọpụta ihe kachasị mma mpaghara a ga-enye, yana ọtụtụ ebe na nhọrọ ụgbọ elu karịa otu ụgbọ elu ndị ọzọ."
New Caribbean na-aga: Montego Bay
N'ebe ugwu-ọwụwa anyanwụ nke Jamaica, Montego Bay bụ ebe akụ na ụba nke agwaetiti ahụ na ọnụ ụzọ mbata maka ọtụtụ ebe ntụrụndụ ya na ebe ndị njem nleta. Oke ihu igwe nke Jamaica na-agba gburugburu, aja aja aja ọcha, mmiri doro anya na ọdịbendị ọdịnala bara ụba na-adọta ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile.
Site na 1 Julaị 2019, LATAM ụgbọ elu Peru ụgbọ elu LA2464 (Lima-Montego Bay) ga-apụ Lima's Jorge Chávez International Airport na Mọnde, Tọzdee na Sọnde na 12: 05, na-abata Montego Bay na 17: 00. Nloghachi azụ (LA2465) ga-arụ ọrụ n'otu ụbọchị ahụ ma pụọ ​​na Sangster International Airport na 18: 05, na-abata na Lima na 22:50 (oge niile mpaghara).
Na mgbakwunye nke Montego Bay, LATAM ga-eje ozi ebe ise na Caribbean na Central America: Havana (Cuba), Punta Cana (Dominican Republic), Aruba na San José (Costa Rica), yana ebe ntụrụndụ ndị ọzọ dị n'ụsọ Oké Osimiri Caribbean gụnyere Cancun (Mexico), Cartagena na San Andrés (Colombia).
Malite na July 2 2019, LATAM ụgbọ elu Peru ụgbọ elu LA2387 (Lima-Calama) ga-apụ na Lima's Jorge Chávez International Airport na Tuesday, Tọzdee na Sọnde na 00: 15, na-abata na Calama na 03: 45. Flightlaghachi azụ (LA2386) ga-arụ ọrụ n'otu ụbọchị ahụ ma pụọ ​​na ọdụ ụgbọ elu El Loa na 04: 35, rute Lima na 06: 05 (oge niile mpaghara).
Site na ọpụpụ na nloghachi oge ụgbọ elu nke elekere abụọ, nkeji 30, ọrụ Lima-Calama na-enweghị nkwụsị ga-ebelata oge njem n'etiti obodo ahụ ihe dịka elekere anọ, nkeji 30. A ga-ejikwa ọrụ ahụ jikọọ nke ọma na ụgbọ elu na / site na United States ma ụgbọ elu Airbus A320 ga-arụ ọrụ maka ndị njem 174, na-enye ngụkọta nke oche 54,400 kwa afọ.
Mgbasawanye netwọk LATAM
N'ime afọ atọ gara aga, LATAM ewepụtala ụzọ ọhụrụ 67 a na-enwetụbeghị ụdị ya, na-ejikọ mpaghara dị ka ndị ọzọ ụgbọ elu ụgbọ elu na-eji ụgbọ elu 1,300 kwa ụbọchị gaa karịa 140 ebe ụwa. Na 2018 naanị, LATAM emeghegoro ọrụ maka mba ụwa ọhụụ gụnyere Costa Rica, Boston, Las Vegas, Rome na Lisbon. Na Disemba, ọ ga-amalite ụgbọ elu na Tel Aviv na na 2019 ọ ga-ejere Munich ọrụ na nke mbụ.